शैक्षिक विकासमा माथागढीको सराहनीय पहल – Palpa Samachar
शैक्षिक विकासमा माथागढीको सराहनीय पहल
पाल्पा । माथागढी गाउँपालिकाले पालिका अन्र्तगतको शैक्षिक विकासका कार्यक्रमहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जसका कारण माथगढीको शैक्षिक सुधार भएको छ ।
माथागढी गाउँपालिकामा १३ माध्यमिक, ४ आधारभुत, २८ प्राथमिक र ४ संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । यी सबै विद्यालयहरुलाई समयसापेक्ष अगाडि बढाउने बिषयमा पालिका प्रतिबद्ध भई लागिपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताउनुभयो ।
पालिका भित्रका विद्यालयहरुमा जनजाति छात्र २ हजार ६ सय ३१, छात्रा २ हजार ४ सय ७८, दलित छात्र ३ सय ६७ र छात्रा २ सय ७४, ब्राह्मण क्षेत्री छात्र १ सय १६ र छात्रा १ सय २२ अन्य छात्र २३ र छात्रा २३ गरि जम्मा ६ हजार १ सय २४ बिद्याार्थी रहेको माथागढी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गजेन्द्र पन्थीले बताउनुभयो ।
बाल बिकास सहजकर्ता ५७ जना, प्रा.वि.तहमा २ सय ७ जना, आधारभुत तहमा .५२ जना, मा.वि.तह ९ र १० ४५ जना र उ.मा.वि.९ जना (गाउँपालिकाले राखेको स्वयम्सेवक शिक्षक) उ.मा.वि.१, मा.वि.३, आ.वि.२, प्रा.वि.२ गरी जम्मा ३ सय ७८ र संघीय सरकार शसर्त अनुदानको १७ गरी कुल जम्मा ३ सय ३२ जना शिक्षक र विद्यालय लेखा कर्मचारीहरु ९ जना गाउँपालिका भित्रका बिद्यालयहरुमा कार्यरत रहेका छन् ।
यो अवधिमा गाउँपालिकाले बिद्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यलाई बिशेष प्राथमिकता दिएको छ । भवन निर्माण ९ वटा विद्यालयहरुमा प्रति विद्यालय ७२ लाख रुपैयाँ बरावरको ४ कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएको । २ कोठे भवन १० वटा विद्यालयहरुमा निर्माण सम्पन्न भएको । वास सहितको सौचालय ४ वटा विद्यालयहरुलाई र अन्य सौचालय ४ वटा विद्यालयहरुलाई, आइ.सि.टी.ल्याव ५ वटा विद्यालयहरुलाई, विज्ञान प्रयोगशाला ५ वटा विद्यालयहरुलाई, पुस्तकालय ५ वटा विद्यालयहरुलाई प्र्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसै गरी बुक क्रर्नर निर्माण १९ वटा विद्यालयहरुलाई, क्रियाकलापमा आधारित पुरस्कृत विद्यालय ५ र कार्य सम्पादनमा आधारित विद्यालय ३ लाई पुरस्कार स्वरुप विभिन्न शैक्षिक सामाग्रीहरु प्रदान गरिएको शिक्षा शाखा प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो ।
शिक्षा शाखाबाट सम्पन्न मुख्य कार्यक्रमहरु
बार्षिक शिक्षा योजना निर्माण गरि गाउँपालिकाले शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । पञ्च वर्षीय गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गरी कार्य गरेको छ । शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण बर्षेनी गर्दै आएको छ । पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेको छ । यसरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने माथागढी गाउँपालिका सम्भवतः जिल्लाको पहिलो पालिका हो ।
कोभिडको महामारीमा पनि विद्यार्थीहरुलाई सिकाईको बातावरण श्रृजना गर्न अभ्यास पुस्तिका निर्माण गरि पालिकाले बितरण गरेको थियो । कोभिडको समयमा उक्त अभ्यास पुस्तिका निकै उपयोगी भएको थियो । पालिकाले गृहकार्य पुस्तिका निर्माण गरी सिकाई गर्दै आएको छ ।
मातृभाषामा शिक्षण भएका (२ वटा विद्यालयमा), विद्यालयहरुको तह तथा कक्षा थपको कार्य सम्पन्न भएको, कक्षा ५ र ८ को सम्पूर्ण परीक्षा गाउँपालिकाले संञ्चालान, ब्यवस्थापन, अनुगमन,मूल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन र प्रमाण पत्र वितरण गर्दै आएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।
उत्कृष्ट प्र.अ.शिक्षक, विद्यार्थी, २०७४ पछि निवृित्तभरण भएका शिक्षकहरुलाई नगद सहित सम्मान गरेको थियो । नमूना विद्यालय छनोट गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु अघि सारेको(महेन्द्र नरेश मा.वि.)माथागढी–७,मटेरीलाई, यसै गरी दिब्य ज्योति मा.वि. कसेनी गाउँपालिका भरिकै नमूना विद्यालय भएका छन् । बिद्यालयहरुको गुरु योजना मार्फत ७ करोड ५० लाखको योजना सम्झौता भएको र काम अगाडि बढेको शाखा प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो ।
प्र.अ.तथा शिक्षकहरुको क्षमता विकास र प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी तालिमा सम्पन्न भएको छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप समिति गठन भई विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् जसको राम्रो प्रभाव परेको छ । दरबन्दी मिलानको कार्य गत श्रावण महिनामा सम्पन्न गरी शिक्षक ब्यवस्थापन गरेको छ । विद्यालयका छाात्राहरुको लागि सेनेटरी प्याड वितरण गरिएको छ । स्थानीय सरकार आए पछि विषय गत कक्षा गत र तहगत सिकाई उपलब्धीमा बृद्धि भएको, शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सम्पन्न भएको छ ।
पालिकाले शिक्षा शाखा मार्फत राष्टपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगित बर्षेनी संञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी सुधार गर्न प्रयत्नसील रहेका छन् । परीक्षा समिति गठन गरी काम भै रहेको शाखाले जनाएको छ । माध्यमिक विद्यालयहरुमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ । अहिले कम्प्युटर नभएका विद्यालयहरुलाई १ सेट कम्प्युटर र एक सेट प्रिन्टर वितरण गर्ने निर्णय भई काम अगाडि बढेको यसमा प्राय प्राथमिक तहका विद्यालयहरु रहेको शाखा प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक रेडियो मदनपोखराले मनायो २४ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न